हौस्का महल र नरकको द्वार | यात्रा समाचार
Getaways यूरोप | | चेक गणतन्त्र
El हौस्का कासल, चेक गणराज्यमा, यो पर्खाल वा moats बिना गढी हो। उहाँलाई ती कहिले पनि आक्रमणकारी र डाकुहरूलाई टाढा राख्नुपर्दैन। यो पौराणिक कथा (वा सायद वास्तविकता?) को साथ पर्याप्त थियो कि भन्छ कि यो एक अथाह खाडलमा बनाइएको थियो जुन भूमिगत बनाउँछ: नरकको ढोका.
त्यो मिथक हो। वास्तविकता के हो भने यो किल्ला १ XNUMX औं शताब्दीमा बोहेमियाका राजा ओट्टोकर तृतीयको आदेशमा ढिला गोठिक शैलीमा निर्माण गरिएको थियो। ती विवरणहरू साँच्चिकै आउने पर्यटकहरूलाई थोरै फरक पर्दछ Hrad हौस्का, जुन पहाड र ज by्गलले घेरिएको देशको यस कुनामा पुग्छ, लगभग kilometers० किलोमिटर उत्तरमा प्रगा। आशा र डरको साथ तिनीहरू सबै आफ्नो गाडी र बसबाट बाहिर निस्किन्छन कि कालो र अथाह मुखमा नरकको लागि नेतृत्व गर्दछ कि डर को साथ।
ढोकामा भयानक स signs्केतहरूले शानदार जीवहरू, आधा मानव आधा जनावरहरू, जुन इतिहासको कुवाबाट गहिराइबाट उदाएको विवरण दिन्छ। अन्य पौराणिक कथा बताउँछ कि एक पटक राजाले एउटा डोरीले कुवा ओर्लदै गरेको र त्यहाँ त्यहाँ के देखे भन्छन् त्यसको बदलामा मृत्युदण्ड दिइएका एउटा समूहको जीवन बचाउने निर्णय गरे। धिक्कारिएको पहिलो अन्धकारमा केही सेकेन्डको लागि मात्र रोक्न सक्छ। जब त्यहाँबाट लगियो उहाँ 30० बर्षको थियो।
यस महलले तिनीहरूलाई कसरी खर्च गर्दछ, जो अलौकिक होइन भने कमसेकम अनौठो हो। यो पिउने पानीको पहुँच बिना, कुनै भान्छा बिना, र कुनै सडक र व्यावसायिक मार्गबाट ​​टाढा बनाइएको थियो। एनिगमास जसले श्रापित स्थानको आभालाई सुदृढ गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » चेक गणतन्त्र » हौस्का महल र नरक द्वार
न्यूजील्याण्डको अविश्वसनीय वेटोमो गुफाहरू